အနုပညာ Archives - Page 255 of 288 - Focus Myanmar
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပျံ့ နှံ့နေတဲ့ ဓာတ်ပုံများနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ မြတ်ကေသီအောင်
”မနေ့ကစပြီး Facebook မှာ ကျွန်မပုံဆိုပြီး အ၀တ်အစားကင်းမဲ့စွာနဲ့ပုံတွေပျံနှံလာတာတွေ့ရတယ်။ ကျွန်မအဲ့လောက်အရှက်မကင်းမဲ့ပါဘူးရှင်။ယုံတဲ့သူတွေကလည်းယုံကြတယ်။
ဒီလောက်နည်းပညာတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာဂျပိုးကိုလိပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတာပဲရှင်။တင်တဲ့သူတွေသူတို့မှာနှမနဲ့အမေမရှိကြဘူးလားရှင်။ ကျိန်းသေတာတစ်ခုကျွန်မဘက်ကပြောနိုင်တာကတော့အဲ့ပုံတွေက ကျွန်မပုံတွေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုတော် နေမင်းအိမ်နဲ့ သူ့ Entertainment ကြားက အငြင်းပွားပြဿနာများ ဘယ်သူမှန်ပြီး ဘယ်သူမှားလဲ ..
“တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ် အကြီးကြီးလုပ်ဖို့က ဖြည်းဖြည်းလေးပဲ ကြိုစားပြီး လုပ်မှရမှာဆိုတော့ အခုလောလောဆယ်တော့ မီနီအယ်လ်ဘမ် အတွက်ပဲ ပြင်ဆင်နေတယ်။ လောလောဆယ်တော့ သီချင်းအားလုံးပေါင်း ငါးပုဒ်ပါမလား၊ ခြောက်ပုဒ်ပါမလားဆိုတာကတော့ လျာထားတုန်းပါပဲ။ အနည်းဆုံးတော့ ငါးပုဒ်ပါမယ်။ သီချင်းတွေကတော့ အလွမ်းအဆွေးပုံစံ လေးတွေပါပဲ”လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ JBJ Entertainment အနေနဲ့ Galaxy Star Top 12 ထဲက စောအယ်ဆေးမူး၊ ဟန်နီထွန်းဝေ၊ ဟန်လင်းနိုင် (ခေါ်) မာကို၊ ဂျွန်ထန် အာ၊ နော်ဆယ်ဆယ်အယ်ဒိုး၊ Alinez အဖွဲ့နဲ့ September (ယခင် Green Papaya အဖွဲ့ကို ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မိန်းကလေးအဖွဲ့)တို့နဲ့ တစ်နှစ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို လက်တွဲလုပ်သွားမှာဖြစ်သလို ကိုရီးယား Training ကိုတော့ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်မှာ သွားရောက် ကြမှာဖြစ်ပြီး တစ်လကျော် ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှာရွတ်ခန်းလို ဒီနေ့တစ်ရက်ပဲ နေပါရစေ
အသက်ငါးဆယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ခန်းဟာ ဘောလီးဝုဒ်ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးမင်းသားကြီးဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။
မနှစ်က တနှစ်တည်းတင် ဒေါ်လာ (၃၃)သန်းကျော် ဝင်ငွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း သူ့ကို ဘုရင်ကြီး ခန်းလို့ တင်စားပြီး ခေါ်ကြရတာပါ။
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့နေ့ရက်တွေတိုင်းကတော့ ခုလို ချိုမြိန်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။
ခန်းကို သာမန်မိသားစုမှာ ပေါက်ဖွားခဲ့ပြီး ဒေလီမြို့က အငှားတိုက်ခန်းလေးတစ်ခုမှာ တမိသားစုလုံး နေခဲ့ရပါတယ်။
ကျောင်းနေကတည်းက သူဟာ ကျောင်းစာတော်ရုံတင်မကပါဘူး။ အားကစားလည်း ထူးချွန်ခဲ့ပါတယ်။
“ဘာကြောင့်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က အရက်သာက်စားပြီးတော့ ၂ နာရီလောက် အရက်မူးပြီးတော့ ကျောက်ဆည်ကနေ သူတို့အောင်သာရွာကို အပြန်ဗျာ၊ သူတို့လမ်းလျှောက်လာတာ။ လမ်းလျှောက်လာရင်းကနေပြီးတော့ တွေ့တဲ့ကားကို ခဲနဲ့ပစ်တာပဲဗျာ။ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဘာမှမရှိပါဘူး”စာရေးဆရာ ညီမင်းညို စီးလာတဲ့ ကားဟာစစ်ကိုင်းမြို့နယ် ကျောက်ဆည်ရွာထိပ်နားမှာ ခဲနဲ့ပေါက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ကားမှန်စထိမှန်ပြီး မျက်နှာမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
မိုးစက်ဝိုင် မှ အေးချမ်းမိုး သို့အားပေးစကား
ပထမဦးစွာ ညီမလေး အေးချမ်းမိုး အစစအရာရာအဆင်ပြေပါစေ. ကံကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေ, အမှတ်တရတွေ သယ်ယူနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ် .သူဟာမိုးစက်နှစ်မှာ အတူယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီး အင်မတန်စိတ်ရှင်းသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ် .ဒီလိုရေးလိုက်တာနဲ့ ညီမလေးအိမ်စည်ကို ချက်ချင်းပြေးသတိရကြမှာပါ .. မိုးစက်လည်းအားလုံးနဲ့ထပ်တူ ဝမ်းနည်းပါတယ် . မိုးစက်ကိုယ်တိုင်လည်း သူ့ကို အရမ်းအားပေးတာ သူကိုယ်တိုင်အသိဖြစ်ပါတယ်. အရည်အချင်းရှိပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်သူတဦးမို့ အောဂနိုင်ဇေးရှင်းရဲ့ ဆုံးရူံးမူတခုလို့လည်းမြင်ပါတယ် . သူသွားပြိုင်မှာကို စောင့်ကြည့်အားပေးသူထဲပါဝင်တဲ့အတွက် ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ လုံးဝမထင်ထားတဲ့ အထဲမှာမိုးစက်လည်းပါပါတယ် .
သူက¯ခဏခဏလဲ မေးကြပါ တယ်၊ အနုပညာရှင်တွေအပေါ် ခွဲစိတ်မှု နဲ့ ပတ်သက်လို့ အစ်မအနေ နဲ့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဝေဖန် ချင်ဘူး၊ ကောင်းတယ်လို့ လဲ လက်မခံပါဘူး၊ ခွဲစိတ်ပြုပြင်တာကို စိတ် ဝင်စားတယ်၊ BOT- OX တို့ filler တို့တော့ လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး ဒီဆေးထိုး လိုက်ရင် အနည်းဆုံး ရှစ်လတစ်နှစ်ခံမယ်၊ အဲဒါက ပြယ်သွားတဲ့ အချိန်ကျရင် ပြန် ထိုးရမှာပဲလေ၊ ဥပမာ သားရေကွင်းတစ်ကွင်းကို ဆွဲကြည့်လိုက်ကွာ တင်းသွားပြီး ပြန်လျော့သွားတဲ့အချိန် ကျရင် သားရေကွင်းက အရင်ဆိုက် မဟုတ် တော့ဘူးလေ၊ ကျယ်သွားတယ် မဟုတ်လား၊ လူလဲ အဲဒီလိုပါပဲ ချဲ့တဲ့အခါ ရွဲ့သွားတယ်လို့ အဲဒီလို ခံစားရတယ်၊ သဘာဝအတိုင်း ရှိနေတာက အဆင်ပြေ လိမ့် မယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်မျက်နှာကို အလှအပ ပြုပြင်ပြီးသွားရင် အဲဒီမျက်နှာ ကိုပဲ လိုချင်ကြတယ်၊ အဲဒီမျက်နှာ မရမှာ စိုးရိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ အချိန်တိုင်းလုပ်နေတဲ့အခါ ပိုက်ဆံတွေ ပိုပြီး ကုန်လာမယ်၊ လိုချင်တပ် မက် စိတ်ကလဲ ပိုများလာတယ်၊ ပိုလှသွားတဲ့ မျက်နှာ ပြင်ပြီးသွားရင် အရင်မျက် နှာ ကို မလိုချင်ကြတော့ဘူးလေ ပိုလှသထက်လှအောင် ပိုပိုလုပ်ချင်တော့ လုပ်နေရတယ်၊ ကိုယ်က စမိသွားပြီဆိုတော့ မလုပ်ရင် မရ တော့ဘူး၊ အဲဒီတော့ လုပ်ချင်ရင် မေးရိုးကားမလား၊ မျက်ရစ် ဖော်မလား တစ်ခါတည်း လုပ်ချ ပစ် လိုက်ပါ၊ အဲဒါတွေက သေရာပါတွေဆိုတော့ လက်ခံတယ်၊ ကိုယ်တိုင်လဲ စဉ်းစားတယ်၊ လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းရင်လဲ ဘာမှမလုပ်ချင်ပါ ဘူး၊ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်က တစ်ခုချင်းစီကြည့်ရင်တော့ မလှဘူးပေါ့၊ ပိုက် ဆံအရမ်းချမ်းသာရင်တော့ လုပ်မယ်၊ အားလုံးခြုံကြည့်ရင်တော့ ကိုယ်မျက်နှာကို သဘောကျပါတယ်” လို့ သရုပ်ဆောင်အေးမြတ်သူက ပြောပါတယ်။
လေယာဉ်စီးရတာ ကြောက်တဲ့ ဂျနီဖာလောရန့်စ်
အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး ဂျနီဖာလောရန့်စ်ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ Silver Linings Playbook ဇာတ်ကားနဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆုကို ရရှိခဲံပါတယ်။ သူမဟာ အော်စကာဆန်ခါတင်စာရင်းမှာ နောက်ထပ် ၃ ကြိမ်လည်း ဝင်ခဲ့ဖူးပြီး၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ Winter’s Bone ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ Joy ဇာတ်ကားတို့နဲ့ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆုအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ American Hustle ဇာတ်ကားနဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့နေရာအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး ဇာတ်ကားတွေကတော့ The Hunger Games ဇာတ်ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုဆီ ပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ တင်ဇာမော်
” အစ်မ အခွင့်အရေးလေးရတုန်းကို အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ချင်တယ်။ ရှေ့လျှောက်မှာ မိသားစုက အစ်မက အမေ တစ်ယောက် အနေနဲ့ အစ်မ အဝေးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ အစ်မယောက္ခမကြီးက အစ်မနေရာကိုယူပြီးတော့ စောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်။ သူက တဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာတာလေ ငယ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ အစ်မသားလေးကလည်း ဒီနှစ် အရေးကြီးတဲ့ အတန်း ကိုတက်နေရတယ်။ရှေ့နှစ်မှာတော့ အခုလောက် သိပ်လုပ်နိုင်ချင်မှလည်း လုပ်နိုင်တော့မယ်။ ကလေးအတွက်လည်း ဦးစားပေးရမယ့် အချိန်ဆိုတာရှိတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်၊ ၇ နှစ်လောက်အထိ အကြာကြီး ဒီကို ပြန်မလာနိုင်ပဲနဲ့ မိသားစုနဲ့နေခဲ့ပါတယ်” လို့ သူကဆိုပါတယ်။
ရင်သားခွဲစိတ်တာကို ကိုယ်တိုင်လည်း မလုပ်သလို သူများတွေကိုလည်း အားမပေးဘူးဆိုတဲ့ ဘေဘီမောင်
ခွဲစိတ်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ ပတ်သက် ပြီး “အရင်ခေတ်က သရုပ်ဆောင် တော်တော်များများက ပင်ကိုလှကြတယ်၊ အပြင်အဆင်သိပ်မရှိဘဲ သဘာဝအတိုင်း လှကြတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ်၊ အခု ခေတ်ကတော့ မော်ဒယ်လ် ကြည့် မလား၊ မင်းသမီးကြည့်မ လား အားလုံး ပြု ပြင်ထားတာကို တွေ့ရတယ်၊ ဒါကလဲ ခေတ်အရ ဖြစ် နေတာဆိုတော့ လေ၊ ဘေဘီ ကိုယ်တိုင်လဲ မကင်းပါ ဘူး၊ သရုပ် ဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် လိုအပ်ချက် လေးတွေရှိတာကို ပြင်ဆင်ရတယ်၊ ဝလာရင် မျက်နှာကြီးတွေ ဖောင်းလာတယ်၊ အဆီတွေ ရှိလာတယ်၊ အဲဒီကျရင် အဆီလေးတွေ သွားထုတ်တာမျိုးတွေ ရှိတာပေါ့၊ ရင်သားတွေ ခွဲစိတ်တာကိုတော့ အားမပေးဘူး၊ အသက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်၊ မလိုအပ်ဘူးလို့လဲ ထင်တယ်၊ သွေးလည်ပတ်မှုရှိတဲ့ အတွက်ကို မလုပ်စေချင်တာပါ၊ မျက်နှာမှာ လိုအပ်လို့ အသေးစားခွဲစိတ်တာ ဆိုရင်တော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ပေါ့၊ ဘေဘီလဲ မျက်နှာနဲ့ပတ်သက် ပြီး လိုအပ်တာလေးတွေ ရှိရင် လုပ် သွားမှာပါပဲ၊ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ် သက်တာတော့ ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါ ဘူး အားလုံး က သဘာဝအတိုင်းပါပဲ ” လို့ သရုပ်ဆောင် ဘေဘီမောင်က ပြောပါတယ်။